” ရင်ဘတ်စည်တီး ငိုလိုက်တော့မယ် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” ရင်ဘတ်စည်တီး ငိုလိုက်တော့မယ် “
” ရင်ဘတ်စည်တီး ငိုလိုက်တော့မယ် “
Posted by ခင်ခ on Mar 26, 2014 in Creative Writing, Poetry | 14 comments
( ဥက္ကဌကြီး..ဥက္ကဌ ကြီး ခင်ညား…
ကိုယ်က သောက်ဂရု မစိုက်ခဲ့တာ…သူတို့လူ ၂၀၀ လောက်ကို
( ဟာ….ဒါပေမဲ့လေ…ဥက္ကဌ ကြီးက…ဟို…ဟို.
ဘာမှလာမပြောနဲ့တော့…လူ ၂၀၀ ထက်ကို
ငါ့ကို ဖဖုရား က Time Limit ပေးထားတာ ကျော်လို့မရဘူး..
ကျော်ရင် ငါ့ကို…သမ လိမ့်မယ်ဟ…”
ငါ့ကို ဖဖုရားက ပုံမှန်လုပ်ဖို့ ခိုင်းထားတာကွ…
” မိဘပြည်သူများ…ခံဗျား….. ”
(Credit to Thunder Pa Yit)
သရော်စာများကို စိတ်ဝင်းစားမိတဲ့ ကျွန်တော်
သရော်စာများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုစိတ်နဲ့ ရေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်
သရော်စာတွေကို ကလူအိသို့ မြူအိသို့ ကလူတူတူ မြူတူတူ ရေးထားရင် ကြိုက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်
ရဲရဲတောက် ကေဇီ၏ ကနဦးကွန်မန့်ကို အရမ်းအရမ်းကို သဘောကျလွန်းမိတယ်ဗျာ။
“အောင်မာ … မင်းကရော ဘယ်လောက်အရည်အချင်းရှိလို့လဲ?”
“ငင် … ကျော့မှာလဲ ရှိဝူးလေ”
“အဲဒါဆိုအပိုတွေလျှောက်မပြောနဲ့ အေးဆေးနေ … ကြားလား?”
“ဦးလေးကလည်း ကျော်ပြောတာက သူ့ထက်တော်တဲ့သူ သမ္မတဖြစ်သင့်တယ်လို့ပြောတာဗျ”
“အေးကွ … မင်းဆိုလိုတာက ဦးရွှေမန်းလား?”
“ဒါဆိုရင် လက်ရှိကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်ဆိုရင်ကော?”
“ဧကန္တ ဦးစိုးသိန်းကို သဘောကျနေတယ် ထင်တယ် ဟုတ်တယ်မှတ်လား?”
“သမ္မတရုံးကလူကရော ဘယ်လိုလဲ? သူလည်းမဆိုးဘူးလေ”
“No!!!! oh ho ”
“သဘောရိုးနဲ့ပြောတတ်ပြီး စစ်တပ်ကို အရမ်းကောင်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့်လား?”
“ငါသိပြီ … နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးလို့ သုံးခါအော်တဲ့ ဦးခင်ညွန့်ကို သမ္မတဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်လား?”
“ဟာ ဦးလေးကလည်း ကျော် ဒီလောက်မပိန်းသေးပါဘူး အဲ့လူကြီးသမ္မတဖြစ်ရင် အကုန်ပိုဆိုးကုန်မှာပေါ့ဗျာ … မနောက်စမ်းပါနဲ့ … No!! ပဲ ”
“ဟကောင် … မင်းက သီချင်းဆိုတဲ့ နိုးအဖွဲ့ကိုများ ပူးတွဲသမ္မတလုပ်စေချင်နေတာလားဟ? နိုးအဖွဲ့က ဟိုဒင်းတွေပြုပြီး ဟိုဟာတွေပြုကုန်ကြပြီ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ပြောစမ်းကွာ မြင်းသိသလောက် သမ္မတဖြစ်ဖို့ ဦးသိန်းစိန်ထက်ပိုပြီး သင့်တော်တာဘယ်သူလဲ?”
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် … လေ … ဦးလေးရဲ့”
“တယ် …. ဒီကောင်တော့ နာတော့မယ် … ငါ့လစာလေး တစ်သိန်းအောက်နဲ့ မင်းတို့မိသားစုကို အိမ်တွေခြံတွေနဲ့ထားပြီး ထမင်းဝအောင်ရှာကျွေးနေတာ အောက်ဆိုက်ရလို့ကွ … အောက်ဆိုက်ရလို့ … ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ သမ္မတ ဖြစ်ရင် ဟိုလူကြီးတွေ လက်ထက်တုန်းကလို ခိုးချင်တိုင်းလည်း ခိုးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး … အောက်ဆိုက်တွေလည်း ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး … ငါ့ဂွင်တွေပိတ်ရင် မင်းတို့တွေလည်း ငတ်မှာ ခွေးဖြစ်မှာ … နားလည်လား?”
“ဖြစ်ချင်ပါတယ် … အဲ ….. မဖြစ်ချင်ပါဘူးဦးလေး”
“အေး .. ခွေးမဖြစ်ချင်ရင် ငါအရင်လိုပဲ အလွယ်တကူ ဂွင်ဖန်လို့ရအောင် ဟို ငပိန်းတွေကို သမ္မတဖြစ်ဖို့ ကူညီရမယ် … ကြားလား?”
“ဟင် …. ကျော်တို့ နိုင်ငံ အတွက်ရော”
“ဟဲ့ကောင် သူတောင်းစား … နိုင်ငံကိုကောင်းစေချင်ရင် ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်ဆွေမျိုး ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်း ကို ကောင်းအောင်အရင်လုပ်ရတယ်ကွ … ဒီကမှတဆင့် ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေသူတွေကို ကြွယ်ဝအောင်ဖန်တီးပေး …. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အားလုံးကောင်းလာမှပေါ့ကွ … တို့နဲ့တည့်တဲ့သူတွေ ကောင်းစားစေရမယ်လို့သာ စိတ်ထဲမှာလုံးလုံး ဆုံးဖြတ်ထားလိုက် …. ဒါဆိုရင် တနိုင်ငံလုံးကောင်းစားပြီ …. အပေအတေ သူတောင်းစားတွေရဲ့ စကားသံတွေကို နားယောင်မနေနဲ့ … ခွေးဖြစ်သွားမယ် … ကြားလား ?”
“ဟင်!!! ဦးလေးပြောတော့ တနိုင်ငံလုံးအတွက် အနစ်နာခံပေးဆပ်တာဆို … ခုကျတော့ နည်းနည်းလွဲနေသလားလို့”
“ဟာ … ဒီကောင် … ငါ ပါးပိတ်ရိုက်လိုက်ရ … ထွက်သွားစမ်းကွာ ငါ့ရှေ့ကနေ ..
တောက် !!!! …. @!#%&*%#$ ”
ဤတွင် … သစ်တစ်ပင်ကောင်း၍ ငှက်တစ်သောင်းနားနိုင်သည်ဟု သတင်းကြီးသည့် အရပ်က အားကျသူ လူကြီးတို့ တူဝရီး အပြန်အလှန်စကားပြောခန်းပြီး၏။
Credit to အောင်ကြီး
ခွိခွိခွိ။ ရီရလို့ ကူးလာတာ။
၃ နှစ်အတွင်း ဘာမှ မထူးခြားဘူးလို့ မပြောပါနဲ့လေ။
ဆင်းရဲသားပပျောက်ရေးအောင်မြင်တယ်လေ။ (ဆင်းရဲသား ရွာလေးတွေ ဘူဒိုဇာနဲ့ကို ထိုးဖျက်ပစ်တာ)
နိုင်ငံခြားကိုလည်း အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောက်ကုန်ပြီ။ (အိမ်ဖော်အဖြစ်နဲ့)
တန်ဖိုးတွေမြင့်တက်လာပြီလေ (လက်ဖက်ရည်ဖိုး ၃ သိန်းတွေဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။)
သိပ်စည်ကားနေတာပဲ။ (ဘာသာရေး အထိကရုန်းတွေ)
ပြည်သူ့ အသံတွေလည်း နားထောင်နေပါတယ် (ခရိုနီတွေ ဆီကတဲ့)
ပြည်သူတွေကို ရီမောစေပါတယ် (ဝန်ကြီးတွေ စကားပြောလိုက်တိုင်းးး)
အရင်က ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ တစ်ကျပ်ကို မပေးတဲ့လက်ထက်ကနေ
ခု သူ့လက်ထက်မှာ ၅ ပြားလောက်ရဖို့ လမ်းမထွက်တောင်းမှ ရအောင်လုပ်ပေးနေတော့ ပြောင်းလဲတယ် ထူးခြားတယ်ပဲ ပြောရမှာပေါ့နော်။
ဒီနေ့ပဲ ကြော်ငြာကပ်ထားတာဖတ်ခဲ့ရတယ်။ အိမ်ဖော်ဖြစ်နည်းသင်တန်း။ နေ့ သုံးနာရီ၊ တပါတ်ငါးရက်၊ ခြောက်ပါတ်တက်ရမယ်။ သင်မှာတွေက အခြေခံ အင်္ဂလိပ်စာရေးပြော၊ မီးပူတိုက်နည်း၊ ကလေးထိန်းနည်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုပြုစုနည်း၊ ကလေးရေချိုးနည်း၊ အ၀တ်လျှော်စက်လှည့်နည်း၊ အိမ်ဖော် တယောက်ဆောင်ရန် နဲ့ ရှောင်ရန်တွေသင်မယ်ဆိုပဲ။ တိုးတက်ပါတယ်။ :byee:
အော် ကေ ဇီ ကေ ဇီ
အ လုပ် တွေ ရှုပ် နေ တာ ဒါ့ ကြောင့် ကိုး
ဖတ် ချင် သေး တယ် P
သများ အရှုပ်လုပ် (အဲလေ) အလုပ်ရှုပ်နေတာတွေ သိကုန်ကြပြီ။
ရဲ ရဲ တောက် ကေ ဇီ ဖြစ် တော့ မယ် လို့ 
-အားမနာလျှာမကျိုး အလကားရတိုင်း ၀င်ပြောကြည့်ဦးမယ်ဗျာ…
-ပထမ အချက်က ဘာလုပ်ရမှန်းရယ် ဘာမလုပ်ရမှန်းရယ် ဘယ်ကစရမှန်းရယ် မသိပဲ ယောင်ကန်းကန်း ဖြစ်နေကြတာ…
-သူတို့ကိုယ်သူတို့ အကုန်လုပ်တတ်တယ် ထင်နေတော့ ဘယ်သူ့ကို အတုခိုး ဘယ်သူ့အကြံယူ ရမယ်ဆိုတာကို ခေါင်းထဲမရောက်နိုင်ကြဘူး..
-ဒုတိယအချက်က သူတို့ သိတာတွေ သိတယ်ထင်တာတွေက မှားနေတာ…
-တတိယအချက်က မှားမှာကြောက်လို့ ဘာကိုမှ အလွယ်တကူ မပြင်ရဲတာ…
-အဲဒီသုံးခုကို စကားတစ်လုံးထဲအဖြစ်ပေါင်းပြောရမှာတော့ အားတော့နာတယ်
– သူများတွေပဲ ပြောပါစေတော့…
တကယ့်အနှစ်သာရ စကားလုံးကျမှ မပြောဘဲထားရလား ဦးပါရယ်
အိုက်လိုတောင် မရီနိုင်ပါဝူး ညော်..
ဆရာမှားသွားရင် Sorry ပါဆိုပြီး လက်ညိုးထောင်ခေါင်းညိတ်ပြီး နေရသေးသရွှေ့ တပည့်မှားတော့ ခေါင်းတစ်ခုလုံး စုတ်ချာအောင် တီးခံရတော့ ဗြောတီးတဲ့ တော်တော် တရားပါတဲ့ စကားစုပဲနော်
ဖြစ်လိုက်သမျှ ဘာတွေမှန်းကို မသိနိုင်အောင်ပါပဲ….
နောက်မှ ဆက်ပြောမယ်….လိုင်းးမကောင်းးလို့ လစ်ပီ……